Ukubeka iliso kwiCCTV PM220WE
Olu luhlu lwebala elibanzi lobuchwephesha be-21.5 ”yokujonga umbala inikezela ngegalelo le-HDMI kunye neVGA. Iphaneli ye-IPS, eziqhayisa nge-16.7 yezigidi zemibala kunye nokusonjululwa kwe-FHD le esweni iya kwenza ividiyo yakho iphile.
Izinto ezibonwayo ze-FHD zixhaswa ngokuqaqambileyo ngumgangatho wokuhlaziya okhawulezayo we-165hz wokuqinisekisa ukuba ulandelelwano oluhamba ngokukhawuleza lubonakala luthe tyaba kwaye luneenkcukacha ngakumbi, ukukunika loo mda xa udlala. Kwaye, ukuba unayo ikhadi yemizobo ehambelanayo ye-AMD, unokusebenzisa ithuba kwitekhnoloji ye-FreeSync yokubek 'esweni ukuphelisa iinyembezi kunye nokuthintitha xa udlala. Uyakwazi ukugcina kunye nayiphi na imarathons yokudlala ebusuku, njengoko ukubeka iliso kwimodi yesikrini ekunciphiseni ukukhutshwa kokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kwaye kunceda ukukhusela ukudinwa kwamehlo.
Izinto ezibonwayo ze-FHD zixhaswa ngokuqaqambileyo ngumgangatho wokuhlaziya okhawulezayo we-180hz wokuqinisekisa ukuba ulandelelwano oluhamba ngokukhawuleza lubonakala luthe tyaba kwaye luneenkcukacha ngakumbi, ukukunika loo mda xa udlala. Kwaye, ukuba unayo ikhadi yemizobo ehambelanayo ye-AMD, unokusebenzisa ithuba kwitekhnoloji ye-FreeSync yokubek 'esweni ukuphelisa iinyembezi kunye nokuthintitha xa udlala. Uyakwazi ukugcina kunye nayiphi na imarathons yokudlala ebusuku, njengoko ukubeka iliso kwimodi yesikrini ekunciphiseni ukukhutshwa kokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kwaye kunceda ukukhusela ukudinwa kwamehlo.
Olu luhlu lubonisa ubungakanani be-LED yesikrini esibanzi se-27 ”inikezela ngegalelo le-HDMI, VGA, BNC kunye ne4in1. Ngokongezwa kwe-BNC kunye neziphumo ze-4in1, ukungahambelani kwayo kuya kuyivumela ukuba isebenzele nasiphi na isicelo. Ukuqhayisa ngombala wezigidi ezingama-16.7 kunye nokusonjululwa kwe-FHD oku kubekwa esweni kuyakwenza ukuba ividiyo yakho iphile.
Ukubeka iliso kwiCCTV PX240WE
Eli banga lokujonga ubungakanani besikrini esibanzi se-LED 23.8 ”yokujonga umbala inikezela ngegalelo le-HDMI, VGA, BNC kunye ne4in1. Ngokongezwa kwe-BNC kunye neziphumo ze-4in1, ukungahambelani kwayo kuya kuyivumela ukuba isebenzele nasiphi na isicelo. Ukuqhayisa ngombala wezigidi ezingama-16.7 kunye nokusonjululwa kwe-FHD oku kubekwa esweni kuyakwenza ukuba ividiyo yakho iphile.
Ukubeka iliso kwiCCTV PX220WE
Eli greyidi libala lobuchwephesha be-LED 21.5 ”yokujonga umbala inikezela ngegalelo le-HDMI, VGA, BNC kunye ne4in1. Ngokongezwa kwe-BNC kunye neziphumo ze-4in1, ukungahambelani kwayo kuya kuyivumela ukuba isebenzele nasiphi na isicelo. Ukuqhayisa ngombala wezigidi ezingama-16.7 kunye nokusonjululwa kwe-FHD oku kubekwa esweni kuyakwenza ukuba ividiyo yakho iphile.
Eli banga lobuchwephesha bebala elibanzi lesikrini se-55 ”4K yokujonga umbala inika i-DisplayPort, i-HDMI, iVGA, iLooping BNC, iAudio In. Eli liliso libonelela ngesisombululo esiphakamileyo kakhulu kunye nokuchaneka kombala, kubungakanani obugqibeleleyo bokusetyenziswa nakweyiphi na indawo. I-bezel yesinyithi kukugqitywa kobuchwephesha ukubonelela ngokuzinza kunye nokuthembeka kubomi beyunithi.
Eli banga lokujonga ubungakanani besikrini esibanzi se-LED 23.8 ”yokujonga umbala inikezela ngegalelo le-HDMI, VGA, kunye neBNC. Ngokuphuma kwemveliso ye-BNC eyongezelelekileyo ukusebenza kwayo kuya kuyivumela ukuba isebenzele nasiphi na isicelo. Ukuqhayisa ngemibala eyi-16.7 yezigidi kunye nokusonjululwa kwe-FHD le esweni iya kwenza ividiyo yakho iphile.
Ukubeka iliso kwi-CCTV PA270WE
Olu luhlu lubonisa ubungakanani be-LED yesikrini esibanzi se-27 ”inikezela ngegalelo le-HDMI, VGA, kunye neBNC. Ngokuphuma kwemveliso ye-BNC eyongezelelekileyo ukusebenza kwayo kuya kuyivumela ukuba isebenzele nasiphi na isicelo. Ukuqhayisa ngemibala eyi-16.7 yezigidi kunye nokusonjululwa kwe-FHD le esweni iya kwenza ividiyo yakho iphile.
Eli banga lokujonga ubungakanani besikrini esibanzi se-LED 23.8 ”yokubonelela ngombala inikezela ngegalelo le-HDMI kunye neVGA. Iphaneli ye-IPS, eziqhayisa nge-16.7 yezigidi zemibala kunye nokusonjululwa kwe-FHD le esweni iya kwenza ividiyo yakho iphile.